Nagu Saabsan - Weldsmt Machines Co., Ltd.
SHENZHEN WELDSMT MACHINERY CO., LTD waa adeeg-bixiye xirfadleyaal ah oo ah qalabka SMT-ka u madax-bannaan, kuna takhasusay soo-saarka iyo iibinta mashiinnada iibinta bilaashka ah ee iibinta rasaasta, mashiinnada iibinta mowjada-madax-bannaan, mashiinnada daabacaadda otomatiga ah ee daabacaadda, robots warshad iyo kuwa kale qalab otomatik ah. Waxaan bixinaa xalka dusha sare ee dusha sare ee SMT iyo alaabada tikniyoolajiyadda teknoolojiyadda ee AI ee ku xiran adeegyada, annagoo ku dadaalna inaan noqdo shirkada ugu wanaagsan marka loo eego tayada wax soo saarka iyo sumcadda adeegga.
Weldsmt waxay leedahay cilmi baaris madax-bannaan iyo waax horumarineed, waaxda CNC, waaxda maareynta birta iyo waaxda isu imaatinka, waxay awood u leedahay inay si madax bannaan oo adag u xakameyso wax soo saarka iyo tayada mashiinka.
Iyada oo in kabadan 10 sano ah khibradaha softiweerka iyo horumarka qalabka, kooxdeena R&D waxay si hufan oo madaxbannaan u baartaan oo ay u horumariyaan qalabka farsamada, qalabka korantada, softiweerka hawlgalka, nidaamyada kontaroolada warshadaha iwm Natiijooyinka waxkababababababababababooshakabababorkaboriska iyo tusaha adeegsiga ISO9001.
Shirkad tikniyoolajiyadeed oo heer sare ah, hal-abuurnimo madax-bannaan ayaa ah xuduntayada. Waxaan aaminsanahay in si deg deg ah R&D iyo adeegsiga tikniyoolajiyada sare ay aasaaska u tahay furaha horumarka ganacsiyada.